ထိရောက်သည့် တိုင်ကြားစာ ရေးပုံရေးနည်း - Myanmar Network
ထိရောက်သည့် တိုင်ကြားစာ ရေးပုံရေးနည်း
Posted by Language Republic on May 25, 2015 at 13:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတွင် မကျေနပ်မှုများကို စာဖြင့်တိုင်ကြားရာတွင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို အလေးပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။
မှားယွင်းသည့် တိုင်ကြားစာ အမျိုးအစား
အောက်ဖော်ပြပါစာတွင် စာသားအချို့ကို ထင်ရှားအောင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထင်ရှားအောင် ပြုလုပ်ထားသည့် စကားလုံးများသည် ဘာကြောင့် မှားယွင်းနေသည်ကို စာ၏ အောက်၌ ဖော်ပြထားသည်များကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် မှားလေ့ရှိသည့် အမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Helpful Trading Co
I am really very disappointed by your shop.
I recently boughtasofa and it just was not right. It was terribly made andacomplete waste of money. When I went back to complain,ashop assistant was very rude to me and she said she couldn't deal with the complaint there and then. She said I should write to the manager.
I think that I am entitled to my money back, so what I want isafull refund or if you cannot manage that,acredit note for the full ammount. I also want an apology, plus an explanation of why I was treated so badly.
Thank you for your attention. Sorry to bring this matter up.
ကျွန်တော်သည် လူကြီးမင်း၏ ဆိုင် ကို အတော်ပင် စိတ်ပျက်မိပါသည်။
ကျွန်တော် မကြာသေးမီကပင် ဆိုဖာ တစ်လုံးဝယ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တကယ့်ကို အဆင်မပြေပါ။ ထို ဆိုဖာကို လုပ်ထားသော လက်ရာသည် အတော်ညံ့ဖျင်းသည့်အတွက် ပိုက်ဆံမှာ လုံးဝ အလဟဿ ဖြစ်သွားပါသည်။ မကျေနပ်ကြောင်းပြောဖို့ ပြန်လာသောအခါ ဆိုင်အကူဝန်ထမ်းက ကျွန်တော့်အပေါ် တော်တော် ရိုင်းပျ ခဲ့ပါသည်။ သူမက မကျေနပ်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ချက်ချင်းမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်တော့် အနေဖြင့် မန်နေဂျာထံ စာရေးသင့်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံ ပြန်ရသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံအပြည့် ပြန်အမ်းတာကိုပဲ အလိုရှိပါသည်။ ထိုသို့ စီစဉ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါက ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ တန်ဘိုးတူ ပစ္စည်း တစ်ခုခုနဲ့ လဲလှယ်ခွင့် ကတ်ပြားကို ရယူလိုပါသည်။ ထို့အပြင် တောင်းပန်မှု နှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော့်အပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိလိုပါသည်။
အလေးထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ပြောပြရတဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ခင်ဗျာ
The Manager : မန်နေဂျာ - စာရေးတဲ့အခါမှာ လူနာမည်တပ် အမြဲရေးပါ။ လူနာမည်၊ ရာထူးတို့ကို အမြဲမေးပါ ထို့နောက် ၎င်းတို့ မည်သူ့ကို အစီရင်ခံရသည်ကို စုံစမ်းပါ။
Disappointed : စိတ်ပျက်မိပါသည် - မည်မျှပင် ထိုက်တန်သည်ဖြစ်သော်လည်း ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို ရှောင်ရှားပါ။
Shop assistant : ဆိုင်အကူဝန်ထမ်း - ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပါတ်သက်၍ မကျေနပ်ကြောင်း တိုင်ကြားမယ် ဆိုပါက ထိုထက်ပိုပြီး တိကျအောင် ဖော်ပြပါ။ သူတို့၏ နာမည်ကို စုံစမ်းပါ (သို့မဟုတ်) ပုံပန်းသဏ္ဏာန်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပါ။
Rude : ရိုင်းပျသည် - ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်မှုကို တိုင်ကြားခြင်းမလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က တကယ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူတာမျိုး ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် စကားပြောဆိုခြင်း။
Think : ထင်ပါတယ် - ဘယ်တော့မှ “ထင်ပါတယ်” မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့မှ ဖော်ပြပါ။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် သင့်တော်တဲ့ ဥပဒေများကို ကိုးကားပါ။)
Manage : တာဝန်ယူမှု - ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးပေးရပါမယ်။ ၎င်းအနေဖြင့် ထိုသို့ မပြုလုပ်နိုင်ပါက အခြားပေးသွင်းသူကို ခေါ်ယူနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို မူလ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလွှာမှ နှုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း “စားသုံးသူဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ကျွန်တော့်အနေဖြင့်…….. ကို ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုပြီး အကြောင်းအရာတွေကို ယေဘုယျ ပြုလိုက်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းပါတယ်။
ဘာကို အလိုရှိတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ - ဥပမာ - ပြန်အမ်းငွေ၊ ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း အစားထိုးပေးခြင်း စသည်ဖြင့်ပါ။ အပြစ်အနာအဆာရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြန်အမ်းငွေကို အပြည့်အ၀ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်စရာရှိတာကို မြန်မြန်ဆောင်ရွက်ပါ။
Amount : ပမာဏ - စာလုံးပေါင်းကို စစ်ပါ (amount ပါ ‘ammount’ မဟုတ်ပါဘူး)။ စာလုံးတွေကို မှားယွင်းပေါင်းမိပါက တိုင်ကြားစာကို ထိရောက်မှု အားနည်းစေပါတယ်။)
Want : လိုချင်ပါတယ် - ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင်စိတ် ပြင်းပြနေပါစေ တောင်းပန်တာ (သို့မဟုတ်) ဖြေရှင်းချက်ကို ဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုပါနဲ့။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လည်းဆိုတာကို မသိရပေမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သင့်မကျေနပ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးနေသူသည် မူလပထမက သင့်ပြဿနာကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ မဟုတ်လို့ပါဘဲ။
Sorry : စိတ်မကောင်းပါဘူး - ဘယ်တော့မှ သင့်အတွက် မတောင်းပန်ပါနဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို မကျေနပ်မှု တိုင်ကြားခြင်းသည် ထို လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဈေးကွက် သုတေသန လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အသေးအဖွဲ့ အချက်ကလေး တစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အကယ်၍ သင်သည် သင့်ရဲ့ စာအစမှာ “Dear Sir” လိုက လိပ်မူခဲ့ရင် “Yours faithfully” ဖြင့် နိဂုံးချုပ်သင့်ပါတယ်။ လူအမည်ဖြင့် လိပ်တပ်ထားသော စာ၏ အဆုံး၌သာ “Yours sincerely” ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
မှန်ကန်သည့် တိုင်ကြားစာ အမျိုးအစား
အောက်မှာတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးထားတဲ့ စာကို ဥပမာအနေနဲ့ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းကို ဥပမာထားပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် တိုင်ကြားစာအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထင်ရှားအောင်ပြထားတဲ့ စာသားတွေအတွက် ဖြေရှင်းချက်ကို အောက်ဖက်တွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
I recently bought ...(giveaprecise description of what you bought, including colour, model and price) in your shop in Smalltown. When I tried to use this item, I discovered that... (say what went wrong and what the product did not do).
I went back to your shop and the shop assistant, Steve Helpful, said that complaints were dealt with by your department. I have... (say what evidence you have got)
I would like you to... (tell them exactly what you want)
I believe I am entitled to this under consumer law.
I look forward to your reply within 14 days and hope this matter can be sorted out quickly.
သို့ မစ္စ အာချာ
ကျွန်မသည် မကြာသေးမီကပင် … (ဘာဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတကို သေသေချာချာဖော်ပြပေးပါ၊ အရောင်၊ အမျိုးကွဲအမည်/နံပါတ် နှင့် ဈေးနှုန်းတို့ အပါဝင်) ကို စမောတောင်းမြို့နယ်ရှိ အမကြီးတို့၏ ဆိုင်တွင် ၀ယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန်လုပ်သောအခါ … (ဘာအမှားဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ ပစ္စည်းက ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာကို ပြောပါ) ဖြစ်နေတာ တွေ့ရှိရပါသည်။
ကျွန်မ ဆိုင်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆိုင်အကူဝန်ထမ်း စတိဗ် ဟတ်ဖူး က မကျေနပ်မှု အတွက် တိုင်ကြားမှုများကို အမကြီးတို့၏ ဌာနက ကိုင်တွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မမှာ … (သင့်တွင် မည်သည့်အထောက်အထား ရရှိထားသည်ကို ပြောပါ။) ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသည် … (သူတို့ကို ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ အတိအကျပြောပါ) ရယူလိုပါသည်။ ဒီစားသုံးသူဥပဒေ အရ ကျွန်မအနေဖြင့် ၎င်းကို ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါသည်။
အစ်မထံမှ အကြောင်းပြန်ချက်ကို ၁၄ ရက်အတွင်း စောင့်မျှော်နေပါမည်။ ဤကိစ္စကို မြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
Dear Ms Archer : သို့ မစ္စအာချာ - အကယ်၍ သင်စာရေးသားနေသူသည် အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါက Mrs. (အိမ်ထောင်သည်) လား၊ Miss (အိမ်ထောင်မပြုရသေးသူ) လား (သို့) Ms လား ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပါ။ မသိပါက Ms. ကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
I have : ကျွန်မမှာ…….ရှိသည် - ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ပြေစာသည် အသုံးဝင်ပါတယ်။ သို့သော် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်က ပစ္စည်း တစ်ခုခု ၀ယ်ခဲ့ကြောင်းကို တခြားနည်းဖြင့် ၀ယ်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပါက ၎င်းကို မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ - အကြွေးဝယ်ကတ်ပြား၊ အကြွေးဝယ်ကတ် ပြေစာ။ ကုန်ပစ္စည်းသည် ကြော်ငြာသလို မဟုတ်ကြောင်း တိုင်ကြားတာဆိုရင်တော့ ၎င်း ပစ္စည်းအကြောင်း သရုပ်ဖော်ရေးသားချက် မိတ္တူတစ်စောင် လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုတော့ မူရင်း သက်သေကို မပေးလိုက်ပါနှင့်။ မူရင်းကို လုံခြုံအောင် သိမ်းထားပြီး မိတ္တူကို ဆောင်ထားပါ။
I would like you to : ကျွန်မအနေဖြင့် သင့်ကို ….. စေလိုပါသည်။ - သင့်အနေဖြင့် လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ရင် - အပြစ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပစ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင် အမ်းငွေအပြည့်ပါ ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် သင့်အနေဖြင့် အနာရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အစားထိုးခြင်း ခံရပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီဖြေရှင်းမှုတွေက အဆင်မပြေဘူးဆို ဈေးနှုန်းလျော့ချခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်အမ်းငွေကို ရခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
I believe I am entitled : ကျွန်မသည် …. ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ယုံကြည့်ပါသည်။ - တိကျသော ဥပဒေသကို အသေအချာမသိပါက သင့်အနေဖြင့် သင့်ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို သိရှိကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောပြီး ၎င်းတို့မှ သင့်တော်သော တုံ့ပြန်မှုကို မပြုလုပ်ပါက ၎င်း ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်းက ပိုမိုကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reply within 14 days : ၁၄ရက် အတွင်း အကြောင်းပြန်ပါ။ - သူတို့ကို နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ (၁၄) ရက်က အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိပါက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထိုနောက်ဆုံးရက်ကို သင့်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ရေးမှတ်ထားပါ။
Jane Doe : ဂျိန်းဒိုး - သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုရင် သင့်နာမည် အပြည့်အစုံနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးလိုက်ပါ။ အချင်းချင်း ပထမ နာမည်နဲ့ ခေါ်ခေါ်ပြောပြော စောစောလုပ်နိုင်လေ သင့်တိုင်ကြားချက်လည်း စောစောဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါမယ်။ အရာရာကိုလည်း ပိုပြီး အားရကျေနပ်ဖွယ် ဖြစ်စေပါတယ်။
bbc.co.uk မှ The wrong and right kind of letter ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားတွင် ဘယ်အခါမှာ Rather ကို အသုံးပြုပါသလဲ
Compliment လား ? Complement လား ?
ဖျောပွပါဆောငျးပါးတှငျ မကနြေပျမှုမြားကို စာဖွငျ့တိုငျကွားရာတှငျ ဆောငျရနျရှောငျရနျမြားကို အလေးပေး ဖျောပွထားပါတယျ။
မှားယှငျးသညျ့ တိုငျကွားစာ အမြိုးအစား
အောကျဖျောပွပါစာတှငျ စာသားအခြို့ကို ထငျရှားအောငျ ဖျောပွထားပါသညျ။ ထငျရှားအောငျ ပွုလုပျထားသညျ့ စကားလုံးမြားသညျ ဘာကွောငျ့ မှားယှငျးနသေညျကို စာ၏ အောကျ၌ ဖျောပွထားသညျမြားကို ဖတျကွညျ့ပွီး အဖွရှောပါ။ ထိုသို့ ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ သငျသညျ မှားလရှေိ့သညျ့ အမှားမြားကို ရှောငျရှားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောသညျ လူကွီးမငျး၏ ဆိုငျ ကို အတျောပငျ စိတျပကျြမိပါသညျ။
ကြှနျတျော မကွာသေးမီကပငျ ဆိုဖာ တဈလုံးဝယျလာခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ တကယျ့ကို အဆငျမပွပေါ။ ထို ဆိုဖာကို လုပျထားသော လကျရာသညျ အတျောညံ့ဖငျြးသညျ့အတှကျ ပိုကျဆံမှာ လုံးဝ အလဟဿ ဖွဈသှားပါသညျ။ မကနြေပျကွောငျးပွောဖို့ ပွနျလာသောအခါ ဆိုငျအကူဝနျထမျးက ကြှနျတေျာ့အပျေါ တျောတျော ရိုငျးပြ ခဲ့ပါသညျ။ သူမက မကနြေပျမှုနဲ့ ပါတျသကျပွီးတော့ ခကျြခငျြးမဖွရှေငျးပေးနိုငျပါဟု ပွောပါသညျ။ ကြှနျတေျာ့ အနဖွေငျ့ မနျနဂြောထံ စာရေးသငျ့ကွောငျး သူမက ပွောခဲ့ပါသညျ။
ကြှနျတျော ကတော့ ကြှနျတေျာ့ပိုကျဆံ ပွနျရသငျ့တယျလို့ ထငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ပိုကျဆံအပွညျ့ ပွနျအမျးတာကိုပဲ အလိုရှိပါသညျ။ ထိုသို့ စီစဉျပေးဖို့ မဖွဈနိုငျပါက ဝယျထားတဲ့ ပစ်စညျးနဲ့ တနျဘိုးတူ ပစ်စညျး တဈခုခုနဲ့ လဲလှယျခှငျ့ ကတျပွားကို ရယူလိုပါသညျ။ ထို့အပွငျ တောငျးပနျမှု နှငျ့အတူ အဘယျကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့အပျေါ ဆိုးဆိုးရှားရှား ဆကျဆံခဲ့ရသညျ့ အကွောငျးရငျးကိုလညျး သိလိုပါသညျ။
အလေးထားပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒီကိစ်စကို ပွောပွရတဲ့အတှကျတော့ စိတျမကောငျးပါဘူး ခငျဗြာ
The Manager : မနျနဂြော - စာရေးတဲ့အခါမှာ လူနာမညျတပျ အမွဲရေးပါ။ လူနာမညျ၊ ရာထူးတို့ကို အမွဲမေးပါ ထို့နောကျ ၎င်းငျးတို့ မညျသူ့ကို အစီရငျခံရသညျကို စုံစမျးပါ။
Disappointed : စိတျပကျြမိပါသညျ - မညျမြှပငျ ထိုကျတနျသညျဖွဈသျောလညျး ပွငျးထနျတဲ့ ပွဈတငျဝဖေနျမှုကို ရှောငျရှားပါ။
Shop assistant : ဆိုငျအကူဝနျထမျး - ဝနျထမျးတဈယောကျယောကျနှငျ့ ပါတျသကျ၍ မကနြေပျကွောငျး တိုငျကွားမယျ ဆိုပါက ထိုထကျပိုပွီး တိကအြောငျ ဖျောပွပါ။ သူတို့၏ နာမညျကို စုံစမျးပါ (သို့မဟုတျ) ပုံပနျးသဏ်ဏာနျကို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ဖျောပွပါ။
Rude : ရိုငျးပသြညျ - ယဘေူယအြားဖွငျ့တော့ ပုဂ်ဂိုလျရေးမကနြေပျမှုကို တိုငျကွားခွငျးမလုပျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ တဈစုံတဈယောကျက တကယျကို ဆိုးဆိုးရှားရှားပွုမူတာမြိုး ဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့။ ဥပမာအားဖွငျ့ - လိငျပိုငျးဆိုငျရာ (သို့မဟုတျ) လူမြိုးရေးခှဲခွားသညျ့ စကားပွောဆိုခွငျး။
Think : ထငျပါတယျ - ဘယျတော့မှ “ထငျပါတယျ” မလုပျပါနဲ့။ သငျ့ရဲ့ ရပိုငျခှငျ့တှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ သိအောငျလုပျပါ။ ပွီးတော့မှ ဖျောပွပါ။ လိုအပျတယျဆိုရငျ သငျ့တျောတဲ့ ဥပဒမြေားကို ကိုးကားပါ။)
Manage : တာဝနျယူမှု - ကုနျပစ်စညျးပေးသှငျးသူကို ပွဿနာ ဖွရှေငျးနိုငျရနျအတှကျ အခှငျ့အရေးပေးရပါမယျ။ ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ ထိုသို့ မပွုလုပျနိုငျပါက အခွားပေးသှငျးသူကို ချေါယူနိုငျပွီး ကုနျကစြရိတျကို မူလ ကသြငျ့ငှေ တောငျးခံလှာမှ နှုတျယူနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး “စားသုံးသူဆိုငျရာ ဥပဒအေရ ကြှနျတေျာ့အနဖွေငျ့…….. ကို ခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို အသုံးပွုပွီး အကွောငျးအရာတှကေို ယဘေုယြ ပွုလိုကျခွငျးက ပို၍ ကောငျးပါတယျ။
ဘာကို အလိုရှိတယျဆိုတာကို ဆုံးဖွတျပါ။ - ဥပမာ - ပွနျအမျးငှေ၊ ပွနျလညျ ပွုပွငျပေးခွငျး (သို့မဟုတျ) ပစ်စညျး အစားထိုးပေးခွငျး စသညျဖွငျ့ပါ။ အပွဈအနာအဆာရှိနတေဲ့ ပစ်စညျးတဈခုအတှကျ ပွနျအမျးငှကေို အပွညျ့အ၀ လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ လုပျစရာရှိတာကို မွနျမွနျဆောငျရှကျပါ။
Amount : ပမာဏ - စာလုံးပေါငျးကို စဈပါ (amount ပါ ‘ammount’ မဟုတျပါဘူး)။ စာလုံးတှကေို မှားယှငျးပေါငျးမိပါက တိုငျကွားစာကို ထိရောကျမှု အားနညျးစပေါတယျ။)
Want : လိုခငျြပါတယျ - ဘယျလောကျပဲ လိုခငျြစိတျ ပွငျးပွနပေါစေ တောငျးပနျတာ (သို့မဟုတျ) ဖွရှေငျးခကျြကို ဘယျတော့မှ မတောငျးဆိုပါနဲ့။ ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့လညျးဆိုတာကို မသိရပမေဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားဟာ ထိုကဲ့သို့ ပွုလုပျပေးဖို့ ခကျခဲကွပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတာကတော့ သငျ့မကနြေပျမှုကို ဖွရှေငျးပေးနသေူသညျ မူလပထမက သငျ့ပွဿနာကို ဖွဈစခေဲ့တဲ့သူ မဟုတျလို့ပါဘဲ။
Sorry : စိတျမကောငျးပါဘူး - ဘယျတော့မှ သငျ့အတှကျ မတောငျးပနျပါနဲ့။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုခုကို မကနြေပျမှု တိုငျကွားခွငျးသညျ ထို လုပျငနျးအတှကျ ကောငျးမှနျအောငျ လုပျပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးကို ဈေးကှကျ သုတသေန လို့ ချေါပါတယျ။
အသေးအဖှဲ့ အခကျြကလေး တဈခု ဖွဈသျောလညျး အကယျ၍ သငျသညျ သငျ့ရဲ့ စာအစမှာ “Dear Sir” လိုက လိပျမူခဲ့ရငျ “Yours faithfully” ဖွငျ့ နိဂုံးခြုပျသငျ့ပါတယျ။ လူအမညျဖွငျ့ လိပျတပျထားသော စာ၏ အဆုံး၌သာ “Yours sincerely” ကို အသုံးပွုသငျ့ပါသညျ။
မှနျကနျသညျ့ တိုငျကွားစာ အမြိုးအစား
အောကျမှာတော့ မှနျမှနျကနျကနျရေးထားတဲ့ စာကို ဥပမာအနနေဲ့ပေးထားပါတယျ။ ၎င်းငျးကို ဥပမာထားပွီး သငျ့ကိုယျပိုငျ တိုငျကွားစာအဖွဈ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ထငျရှားအောငျပွထားတဲ့ စာသားတှအေတှကျ ဖွရှေငျးခကျြကို အောကျဖကျတှငျ တှနေို့ငျပါတယျ။
သို့ မစ်စ အာခြာ
ကြှနျမသညျ မကွာသေးမီကပငျ … (ဘာဝယျခဲ့တယျဆိုတကို သသေခြောခြာဖျောပွပေးပါ၊ အရောငျ၊ အမြိုးကှဲအမညျ/နံပါတျ နှငျ့ ဈေးနှုနျးတို့ အပါဝငျ) ကို စမောတောငျးမွို့နယျရှိ အမကွီးတို့၏ ဆိုငျတှငျ ဝယျယူခဲ့ပါသညျ။ ၎င်းငျးပစ်စညျးကို အသုံးပွုရနျလုပျသောအခါ … (ဘာအမှားဖွဈသှားတယျ ပွီးတော့ ပစ်စညျးက ဘာမလုပျဘူးလဲဆိုတာကို ပွောပါ) ဖွဈနတော တှရှေိ့ရပါသညျ။
ကြှနျမ ဆိုငျကို ပွနျသှားခဲ့ပါသညျ။ ထို့နောကျ ဆိုငျအကူဝနျထမျး စတိဗျ ဟတျဖူး က မကနြေပျမှု အတှကျ တိုငျကွားမှုမြားကို အမကွီးတို့၏ ဌာနက ကိုငျတှယျကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။ ကြှနျမမှာ … (သငျ့တှငျ မညျသညျ့အထောကျအထား ရရှိထားသညျကို ပွောပါ။) ရှိပါတယျ။ ကြှနျမသညျ … (သူတို့ကို ဘာလိုခငျြတယျဆိုတာ အတိအကပြွောပါ) ရယူလိုပါသညျ။ ဒီစားသုံးသူဥပဒေ အရ ကြှနျမအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးကို ရပိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ ယုံကွညျပါသညျ။
အဈမထံမှ အကွောငျးပွနျခကျြကို ၁၄ ရကျအတှငျး စောငျ့မြှျောနပေါမညျ။ ဤကိစ်စကို မွနျမွနျဖွရှေငျးနိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ပါသညျ။
Dear Ms Archer : သို့ မစ်စအာခြာ - အကယျ၍ သငျစာရေးသားနသေူသညျ အမြိုးသမီးဖွဈနပေါက Mrs. (အိမျထောငျသညျ) လား၊ Miss (အိမျထောငျမပွုရသေးသူ) လား (သို့) Ms လား ဆိုတာကို သိအောငျလုပျပါ။ မသိပါက Ms. ကို အသုံးပွုတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါသညျ။
I have : ကြှနျမမှာ…….ရှိသညျ - ငှလေကျခံရရှိကွောငျး ပွစောသညျ အသုံးဝငျပါတယျ။ သို့သျော ဆိုငျတဈဆိုငျဆိုငျက ပစ်စညျး တဈခုခု ဝယျခဲ့ကွောငျးကို တခွားနညျးဖွငျ့ ဝယျခဲ့ကွောငျး သကျသပွေနိုငျပါက ၎င်းငျးကို မလိုအပျပါ။ ဥပမာ - အကွှေးဝယျကတျပွား၊ အကွှေးဝယျကတျ ပွစော။ ကုနျပစ်စညျးသညျ ကွျောငွာသလို မဟုတျကွောငျး တိုငျကွားတာဆိုရငျတော့ ၎င်းငျး ပစ်စညျးအကွောငျး သရုပျဖျောရေးသားခကျြ မိတ်တူတဈစောငျ လိုအပျပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကိုတော့ မူရငျး သကျသကေို မပေးလိုကျပါနှငျ့။ မူရငျးကို လုံခွုံအောငျ သိမျးထားပွီး မိတ်တူကို ဆောငျထားပါ။
I would like you to : ကြှနျမအနဖွေငျ့ သငျ့ကို ….. စလေိုပါသညျ။ - သငျ့အနဖွေငျ့ လငျြမွနျစှာဆောငျရှကျရငျ - အပွဈရှိတဲ့ ပစ်စညျးကို ပဈပယျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့အပွငျ အမျးငှအေပွညျ့ပါ ပွနျရနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုမှ မဟုတျရငျ သငျ့အနဖွေငျ့ အနာရှိတဲ့ ပစ်စညျးကို ပွနျပွငျခွငျး (သို့မဟုတျ) အစားထိုးခွငျး ခံရပါလိမျ့မယျ။ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဒီဖွရှေငျးမှုတှကေ အဆငျမပွဘေူးဆို ဈေးနှုနျးလြော့ခခြွငျး (သို့မဟုတျ) ပွနျအမျးငှကေို ရခှငျ့ရှိပါတယျ။ ဒါဟာ ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ယိုယှငျးပကျြစီးမှုကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားမှာ ဖွဈပါတယျ။
I believe I am entitled : ကြှနျမသညျ …. ခံစားခှငျ့ရှိသညျဟု ယုံကွညျ့ပါသညျ။ - တိကသြော ဥပဒသေကို အသအေခြာမသိပါက သငျ့အနဖွေငျ့ သငျ့ဥပဒဆေိုငျရာ အခှငျ့အရေးကို သိရှိကွောငျး အရိပျအမွှကျပွောပွီး ၎င်းငျးတို့မှ သငျ့တျောသော တုံ့ပွနျမှုကို မပွုလုပျပါက ၎င်းငျး ဥပဒအေတိုငျး ဆောငျရှကျမညျဖွဈကွောငျး ပွောခွငျးက ပိုမိုကောငျးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Reply within 14 days : ၁၄ရကျ အတှငျး အကွောငျးပွနျပါ။ - သူတို့ကို နောကျဆုံးရကျ သတျမှတျပေးလိုကျပါ။ (၁၄) ရကျက အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။ သတျမှတျထားသညျ့ရကျအတှငျး အကွောငျးပွနျခွငျးမရှိပါက ဆကျလကျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ ထိုနောကျဆုံးရကျကို သငျ့နစေ့ဉျမှတျတမျးစာအုပျတှငျ ရေးမှတျထားပါ။
Jane Doe : ဂြိနျးဒိုး - သငျ့ရဲ့လုံခွုံရေးအတှကျ စိုးရိမျစရာမရှိဘူးဆိုရငျ သငျ့နာမညျ အပွညျ့အစုံနှငျ့ တယျလီဖုနျးနံပါတျတို့ကို ပေးလိုကျပါ။ အခငျြးခငျြး ပထမ နာမညျနဲ့ ချေါချေါပွောပွော စောစောလုပျနိုငျလေ သငျ့တိုငျကွားခကျြလညျး စောစောဖွရှေငျးပွီး ဖွဈပါမယျ။ အရာရာကိုလညျး ပိုပွီး အားရကနြေပျဖှယျ ဖွဈစပေါတယျ။
bbc.co.uk မှ The wrong and right kind of letter ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီနရောမှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Thu Zar on May 26, 2015 at 16:48
Permalink Reply by fawyas uddin on May 30, 2015 at 12:39
ဒီ Myanmar network net မှာအသင်းဝင်​ တစ်​ဦးဖြစ်​လာပြီး ဗဟုသုတ ဆုံတဲ့ အင်္ဂလိပ်​သင်​ခန်းစာ​တွေကို ​လေ့လာဆည်းပူး​လေ့လာဆည်းပူးနိုင်​တဲ့ အတွက်​ အထူး​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါတယ်​။